Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno jir waxaana saaxiibo la ahay daryeelahayga. Mararka qaar waxaan la aadaa keligeena dabaal. Daryeelayaasha kale waxay u maleeyaan in ay midaani tahay arin aan wanaagsanayn waxayna doonayaan in ay iga celiyaan. Maxay sidaasi u samaynayaan?
Du bist hier: Startseite / Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno jir waxaana saaxiibo la ahay daryeelahayga....
20. Dezember 2017 /in /von editorialteam
Daryeelahaagu waxay haysataa shaqo.
Shaqadaasi ayadu waxay ka warhaynaysaa gabdhaha iyo wiilasha kooxda guud ahaan.
Ayada waxaa looga baahanyahay in ay ka warhayso dhammaan dhallinyarada.
In ay adiga saaxiib kula noqoto waxay ka dhigantahay in:
Ay adiga gaar ahaan kuu taqaano si wanaagsan.
Ama in ay adiga kaa jeceshahay kuwa kale.
Midaasna waxay sababaysaa in ay kuwa kale kacaan.
Qof ayaa u malayn kara
in daryeelahaagu ay tahay qof aan cadaalad u samaynaynin dhallinyarada kale.
Saaxiibtinimadu sidoo kale waa in ay noqotaa mid loo simanyahay.
Laakiin daryeelahaagu waxay adiga kuu samayn kartaa go’aanada.
Midaasna macnaheedu waxay tahay in aadan la sinayn kuwa kale.
Dalka Jarmalka saaxiibtinimada noocaas ah waxay ka tahay “qof aan xirfad lahayn”.
Midaasna macnaheedu waxay tahay
in daryeelahaagu ay kala saarto shaqadeeda iyo nolosheeda gaarka ah.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-12-20 15:06:112017-12-20 15:06:11Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno jir waxaana saaxiibo la ahay daryeelahayga. Mararka qaar waxaan la aadaa keligeena dabaal. Daryeelayaasha kale waxay u maleeyaan in ay midaani tahay arin aan wanaagsanayn waxayna doonayaan in ay iga celiyaan. Maxay sidaasi u samaynayaan?